Ukuhlanzeka okuphezulu ukuminyana okuphezulu strenth graphite imikhiqizo Abenzi nabahlinzeki | China High ubumsulwa high strenth graphite imikhiqizo Factory
Ipuleti le-graphite anode
I-graphite anode plate, i-anode barrel, i-graphite anode rod (eyaziwa nangokuthi i-graphite anode plate, i-graphite anode rod) inezici ezinhle kakhulu: ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba okuhle nokushisa kokushisa, imishini elula, ukuzinza okuhle kwamakhemikhali, ukumelana nokugqwala kwe-asidi ne-alkali, okuphansi okuqukethwe umlotha. Umkhiqizo usetshenziselwa ukuxazulula isixazululo samanzi, ukulungiselela i-chlorine, i-caustic soda, isixazululo sosawoti se-electrolyzing ukulungisa i-alkali, noma ukwenza i-electroplating izithwali ezahlukahlukene zensimbi nezingezona zensimbi, isibonelo, ipuleti le-graphite anode lingasetshenziswa njenge-anode eqhuba usawoti we-electrolyzing Isixazululo sokulungiselela i-caustic soda. Ingasetshenziselwa ukwelashwa kwendle ezimbonini zamakhemikhali, ze-elekthronikhi nezindwangu. Esitokisini se-electrolytic, isigxobo lapho okugeleza khona manje kusuka kwesinye kuye ku-electrolyte kubizwa nge-anode. Emkhakheni we-electrolysis, i-anode ngokuvamile yenziwa ifomu lepuleti, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-anode plate. Izici zezinto ze-anode ze-electrolysis:
I-graphite yomlilo ojikelezayo
I-graphite ingasetshenziswa njengokufaka uphawu nezinto zokuthambisa, futhi isetshenziswa kakhulu kuma-kilns rotary rotns.Inezinhloso ezimbili eziyinhloko: eyodwa isetshenziselwa ukubeka uphawu ekhanda lomlilo nomsila womlilo, kanti enye isetshenziselwa ukuthambisa phakathi kwesondo lesithwali futhi ibhande lesondo. Imikhiqizo ye-graphite esetshenziswe kukho konke ngeyokwakhiwa kwebhulokhi.
I-Laser graphite baffle / graphite baffle
Ama-graphite baffles anokusebenza okuhle kagesi, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana ne-acid ne-alkali, ukumelana nokugqwala nokulula ukucubungula.
Namachibi ukumelana graphite emoyeni ipayipi
I-graphite rotor yakhiwa izingxenye ezimbili: induku ye-Rotor kanye nombhobho. Uhlelo lokudlulisa luhambisa i-graphite rotor ukuze ijikeleze, bese kuthi i-argon noma i-nitrogen ishaywe ngensimbi encibilikisiwe ngenduku ye-rotor nombhobho.
Ubumsulwa obuphezulu be-graphite tube
Umsizi wethu we-graphite wenziwe ngobumsulwa obuphezulu be-graphite, i-Graphite yaziwa njengenye yezinto eziphakeme kakhulu zokushisa okushisa. Iphuzu layo lokuncibilika lingu-3850 ℃ + 50 ℃, indawo ebilayo engu-4250 ℃. Izinhlobo namashubhu we-graphite ahlukahlukene asetshenziselwa ukushisa isithando somlilo, insimu eshisayo.